Extraterrestrials eo an-toerana - Church of God of Switzerland Switzerland
lahatsoratra > Day-by-Day > Fialantsasatra eo an-toerana
Tamin’ny finoana an’i Kristy no niara-nitsangana taminy ka nafindra ho any an-danitra ao amin’i Kristy Jesosy » (Efes 2,6 Fanantenana ho an'ny rehetra).
Indray andro dia niditra tao amin'ny kafe iray aho ary tsy teo amin'ny eritreritro. Tsy niarahaba aho nandalo tena mahazatra. Nisy nantsoina hoe: "Salama, aiza ny misy anao?" Raha ny tena izy, dia namaly aho hoe: «Salama! Miala tsiny, any amin'ny tontolo hafa aho, mahatsiaro ho vahiny antsasaka ». Nihomehy izahay. Tsapako rehefa nisotro kafe fa maro ny fahamarinana amintsika kristiana amin'ireny teny ireny. Tsy eto amin'ity tontolo ity isika
Niresaka momba izany i Jesosy ao amin’ny vavaky ny mpisoronabe, izay hitantsika ao amin’ny Jaona 17,16 vakio ny hoe: “Ianareo dia kely amin’izao tontolo izao tahaka Ahy” Ao amin’ny andininy faha-20 Jesosy dia mivavaka ho antsika: “Izaho tsy mivavaka ho azy ihany, fa ho an’izay rehetra mandre Ahy amin’ny teniny ka mino Ahy”.
Tsy hitan’i Jesosy ho anisan’izao tontolo izao isika ary hoy i Paoly nanazava hoe: “Isika kosa dia olom-pirenen’ny lanitra, ary avy any an-danitra no andrasantsika ny Mpamonjy antsika, dia Jesosy Kristy Tompo” (Filipiana). 3,20 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Izany no toeran'ireo mpino. Tsy olona monina eto amin'ity tontolo ity ihany, fa mponina any an-danitra ihany koa, extraterrestrial!
Rehefa nieritreritra izany bebe kokoa aho dia tsapako fa tsy zanak’i Adama intsony isika, fa zanak’Andriamanitra araka ny Fanahy. Hoy i Petera tao amin’ny taratasiny voalohany: “Nateraka indray ianareo. Ary tsy anananao izany ny ray aman-dreninao, izay nanome anao ny fiainana teto an-tany; Tsia, fa Andriamanitra mihitsy no nanome anareo fiainana vaovao tsy mety maty amin’ny teniny velona sy mandrakizay » (1. 1 Petera 23 ho an’ny rehetra).
Hoy i Jesosy tamin’i Nikodemosy Fariseo, nandritra ny fivoriany isan’alina: “Izay ateraky ny nofo dia nofo; izay ateraky ny Fanahy dia Fanahy » (Jaona 3:6).
Mazava ho azy fa tsy misy tokony hiafara amin'ny fireharehana. Ny zavatra rehetra raisinao avy amin'Andriamanitra dia tokony hivaona amin'ny toetran'ny mpiara-belona aminao. Manome fiononana anao izy mba hahafahanao mampionona olon-kafa. Manome fahasoavana ho anao Izy. Mamela anao izy ka mamela ny hafa ianao. Izy no nanafaka anao tsy ho maizak'izao tontolo izao mba hahafahanao miara-mandeha amin'ny hafa amin'ny fahafahana. Faly miarahaba an'ireo vahiny rehetra eto an-toerana.